KP to decide on Zim’s diamonds future this week
Reports say the embattled Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) is expected to pass a verdict on the future of controversial Zimbabwean diamonds when it convenes a four day meeting in Namibia this week.
Shortwave Radio Africa noted that the Kimberley Process will consider a final report by a review mission recommending a total ban on Zimbabwe's diamonds.
The mission called on the Zimbabwean government in an interim report in July, to demilitarise the Chiadzwa diamond fields, saying the security forces were involved in human rights violations.
The Zimbabwean army, has however, refused to vacate the diamond fields.
Other media reports suggested that the final report to be tabled in Namibia recommended a temporary ban of six months or more to allow the troubled country to comply with KPCS standards.
However, should Zimbabwe opt to self suspension, the KP is expected to undertake necessary processes to implement the self suspension as the southern African country could not be trusted to implement recommendations without supervision, said reports.